The Myanmar Military and SPDC extremist terrorists are using these Military-lapdog monks to incite anger on Muslims | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeThe Myanmar Military and SPDC extremist terrorists are using these Military-lapdog monks to incite anger on Muslims
The Myanmar Military and SPDC extremist terrorists are using these Military-lapdog monks to incite anger on Muslims
March 23, 2017 drkokogyi
Actually…at least 2-3 hundreds of Buddhist extremists were killed by brave Meiktila Muslims. The Myanmar Military and SPDC extremist terrorists are using these Military-lapdog monks to incite anger on Muslims.
You see when Yangon Muslims protested followed by Buthidaung/ Maungdaw protest after Taungoke Massacre (ice on the cake was DASSK consolingaMuslim) they managed to start the Rohingya Genocide.
Now these Myanmar Military and SPDC extremist terrorists were (and are) expecting the Myanmar Muslims’ anger and protests by revealing the Meiktila Massacre pictures/video and U Ko Ni’s murder.
I hope and pray that instead of going out on the road protesting, Myanmar Muslims and its leaders should write/ report officially to the authorities (local/Myanmar Gov/Embassies / foreign media /UN/OIC etc) We need to co-operate or persuade GOOD/Kind-hearted/fair-minded NLD, Monks, public (Bamas/Ethnic Minorities/Religious minorities) to publisized those plots and traps….
Actually Myanmar Military and SPDC extremist terrorists wish to subdue the Myanmar Muslims if we protest outside and createamassive massacre and later madeacoup as if to control the unrest.
16 hrs · Kuala Lumpur ·
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဂုဏ်ယူ ဝံ့ကြွားနိုင်မည့် စာတစောင်
ဝန်ခံ ဂတိ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း
မိတ္ထီလာမြို့ ၊ ပြည်သာယာ(မ) ၊ယ၊၅၅ နေ အဘ ဦးမန်းဒါ
၏ ဦးတင်မြင့် (ခ) ဦးဂျာနီ ၏ နေအိမ်တွင် သောကြာနေ့
တိုင်းတွင် ဘုရားဝတ်ပြု ဗလီ သဖွယ် အသုံးပြု နေ
ခြင်းအပေါ် နောက်နောင် ဦးတင်မြင့် (ခ) ဦးဂျာနီ နေ
အိမ်တွင် ဘုရားဝတ်ပြု ခြင်း ၊ ဗလီအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း
ကို မပြု လုပ်တော့ပါကြောင်း နှင့် ၎င်း ကိစ္စ ကျူးလွန်
ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူ
ခြင်း ခံရမည်ကို သိရှိပြီး ဝန်ခံ ဂတိ လက်မှတ် ရေးထိုး
ဦးတင်မြင့် (ခ) ဦးဂျာနီ ×××(လက်မှတ်)-(လက်ဗွေ)
Khin Maung Htwe တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်ပိုပိုဆိုးဆိုးလာတဲ့ ခွဲခြားမှုတွေ မတရားမှုတွေ မစာနာမှုတွေ လူမဆန်မှုတွေချည်း တွေ့နေရတယ်။ လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားများ စိတ်အလွန်ပျက်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထဲ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားကိုတောင် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ မရှိခိုးရတဲ့နိုင်ငံ။ အသက်သာကြီးပြီး သေခါနီးလူတွေ သူများကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကို မတရားပုတ်ခတ်စော်ကားနေတာတွေ။ အလကားနေရင်း မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ဖိနှိမ်စော်ကားဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတာလားဗျာ။ ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းက သိပ်မြန်တယ်နော်…..
2 hrs · Yangon, Myanmar ·
ချစ် ကြည် ရေး
အ တူ တ ကွ ငြိမ်း ချမ်း စွာ လက် တွဲ ကြ ရေး
သင် တစ် ကျပ် ၊ ကျွန်ုပ် တစ် ကျပ်
တန်း တူ ညီ မျှ ရေး နှင့် ခွဲ ခြား မှု များ ကို ဆန့် ကျင် ရေး…
သို့ သော်..လက် တွေ့ ဘ ဝ တွင် မူ…
အ ထက် ပါ တို့ သည် နား ထောင် ၍ ကောင်း သော စ ကား လုံး များ သာ ဖြစ် ကြ ၏
← လေဆိပ် အကြမ်းဖက်မှုနောက်မှာ….. ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်(ခ) မယ်တော်ကြီး ရှိသလား?
I hope and pray that as we all stick and practise to radicalism and extremism inapeaceful way and no one should try to wrongly label us as terrorists →